Namichi 'raajii' Wallaggatti nama du'e nan kaasa gaafa jedhe warra akkamin amansiise - BBC News Afaan Oromoo
Namichi 'raajii' Wallaggatti nama du'e nan kaasa gaafa jedhe warra akkamin amansiise
Namichi 'raajii' ofiin jedhu torban darbe Godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu magaalaa Galiilaatti warra du'aa dhaqee namichi du'e hin ka'a jechuun owwaala buqqise ijoo dubbii ture.
Boodarras yeroo milkaa'uu dhabu akka hin danda'amne ibsuun biraa yeroo deebi'u ummanni itti ka'e jennaan poolisiin to'annoo jala oolche.
Owwaala buqqaasuun aadaa hawaasichaan safeeffatamuun alatti seerri Itoophiyaa illee akka yakkaatti kaa'a.
Obbo Balaay Biiftuun torban darbe du'an. Gaafa miidhaman sana midhaan otoo afaanitti hin godhatiin namoota naannoo isaaniitii gara naannoo biraatti hammeenya deeman doqdoqqeee isaaniin marmaarsaa turan.
Yeroo sadeeffaaf erga deebi'aniin booda garuu hafuurri isaanii bade jedhu haati warraa obbo Balaay adde Zannabuu Amantee.
Bilbilli hojjetu dhabnaan, ''mucaa koo bakkee dhaabbatu, maal taate jennaan Balaay kootu motoraan rukutamee gara Giddaatti Ambulaansiin dabarsitee naan jedhe'' jedhu. Ergasiis du'aasaa manatti fidu dubbatu.
Namichi raajii ofiin jedhu akkamin maatii amansiise?
Ganama warri hammeenyaa otoo hirribaa hin ka'iin kan achitti argaman namichi raajii ofiin jedhuufi maqaan isaaniis Geetaayaawqaal Ayyaala jedhaman deebi'anii du'a dhagahii biraa deemanii deebi'uun iddooma dura taa'aan taa'u.
Ergasii ''hin wixxisuuu, hin wixxisuu'' jedhu haati warraa obbo Balaay daqiiqaa digdamaa booda ammas deebi'anii deemuun firoota Naqamteerraa du'a gahii dhufan waliin shaanxaa qabatanii dhufan.
Keessummoonni erga taa'anin booda, namni kun ol ka'uun ergaa dabarfachuu barbaada jechuun Macaafa Qulqulluu irraa seenaa Alaazaar dubbisuu isaanii himu.
''Balaay du'aa ka'uusaatti ni amantuu? Har'i guyyaa sadaffaa dha, ergaan naa darbaa jira, na cinqaa jiraa jedhee'' namootni akka kadhatan gaafate, maatii imimmaan buusaa gara Waaqasaani kadhachuutii ka'an jedhan aadde Zannabuu Amanteen.
Warri du'aa ka'uu Alaazaaritti amantan na duukaa bu'aa yeroo jedhu namni raajii jedhee of waamu kuni maatiin obbo Balaay gammannee fi amannee isa dursinee bakka awwaalchaa geenyee jedhu.
Waan lafa awwaalchaatti tahe
Maatiin lafa awwaalchaa yeroo gahan namootni siidaa obbo Balaay ijaaraa turan jedhu haati warraa isaanii. Namni kuni akka gadi jedhee kadhatu gaafataniiru.
''Dhakaa reenfa irraa fuudhee yeroo daddarbatu booda ani ofan wallaale.''
Boodarra, maqaa Balaay jechuun irra deddeebi'ee yeroo waamu deebi'een ka'e jedhu haati warraa isaanii.
Lammatas of wallaalanii kufuun mana yaalaatti of baruu isaanii Aadde Zannabuun BBC'tti himan.
Mana banaa dhiisanii gara iddoo reenfaatti waan yaa'aniif, mucaan ji'a sagalii manatti irraanfatamtellee miidhamtee turte. Manni keenyis saamamee ooles jedhaniiru.
Obbolessi Obbo Balaay, Gurmeessaa Biiftuun immoo boodarra iddoo awwaalaa akka gahan himanii poolisiin naannoo sana jiraachuun namicha qabachuuf waan gaarii tures jedhaniiru.
''Erga hin danda'u jedhee namni hundi ni boo'e, 'feentii ba'ee', gaggabee lafarra gangalatee boo'aa ture gara mana yaalaatti guuramaa ture,'' jedhu Aadde Zannabun.
Dabalataanis, reenfi guyyaa afur waan buleef foolii godhatee ture, kanumaaf namni irraa baqatee biyyoo illee namni itti uwwisu hin turre jedhan adde Zannabuun.